“Mbappé wuxuu si xoogan u doonayay inuu ku biiro Real Madrid” – Unai Emery – Gool FM
(Yurub) 21 Maajo 2019. Tababarihii hore Paris Saint-Germain isla markaana haatan leyliya kooxda Arsenal ee Unai Emery ayaa shaaca ka qaaday in xilligii uu macalinka ka ahaa PSG, uu Kylian Mbappé si xoogan u doonayay ku biirista Real Madrid.
Kylian Mbappé oo 20 jir ah ayaa haatan ka mid ah xidigaha ugu fiican kubadda cagta ee aduunka, kaddib markii uu qaab ciyaareed cajiib ah ka sameeyay kooxdiisa Paris Saint-Germain iyo xulkiisa qaranka France.
Kooxda Real Madrid ayaa isku dayday inay la saxiixato Mbappé xagaagii lasoo dhaafay, laakiin waxay ku guuldareysatay inay hesho xiddiga reer France.
Unai Emery oo markhaati u ahaa wax walba ee waqtigaas ku saabsan, ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Kylian Mbappé uu si weyn u doonayay ku biirista kooxda Real Madrid, iyo doorka uu isaga ka ciyaaray in ciyaaryahanka uu sii joogo kooxda reer France.
“Kylian Mbappé wuxuu aad u jeclaan lahaa inuu ku biiro Real Madrid, laakiin waxaan la hadlay aabihiis si aan ugu qanciyo inuu sii joogo kooxda Paris Saint-Germain” waxaa sidaas yiri Unai Emery oo wareysi ku bixiyay wargeyska “AS” ee dalka Spain.
“Mbappé wuxuu doonayay inuu heshiis u saxiixo Real Madrid ama Barcelona, laakiin maamulka kooxda ayaa u sheegay in Paris Saint-Germain ay tahay kooxda heysata mashruuca ugu weyn ee France, isla markaana uu noqon doono qeyb weyn ee ka mid ah, iyadoo ay maamulka kooxda ku guuleysteen inuu sii joogo”.
Waxaa xusid mudan in Kylian Mbappé uu dhawaantan si maldahan u sheegay inuu ka tagayo Paris Saint-Germain xilli ciyaareedka soo aadan.
SAWIRRO: Kooxda Manchester City oo koobabkii ay ku guuleysatay xilli ciyaareedkan ku soo wareejisay Magaalada Manchester